Shiinaha Customized qadada baako Soosaarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bac qadada > Xirmada qadada dadka waaweyn
Sabtiyada iyo axadaha ama maalmaha ciidaha, qoysku gaari ayey ku safri karaan.Waxay ahayd wakhti qadada waxaanan keensaday qado ii gaar ah.Waxaa jira boorsooyin waaweyn oo loogu talagalay cabitaannada biirka qabow iyo boorsooyin yaryar oo loogu talagalay sanduuqyada qadada.
Bacda qadada ee dadka waaweyn
1. Bacda qadada ee dadka waaweyn - cunto ku filan safarada is-wadista:
2. Qodobbada muhiimka ah ee qaabeynta nafaqada ee loogu talagalay saddex cunno maalintii dadka waaweyn ee caadiga ah
(1) Go'aaminta wadarta tamarta maalin iyadoo la fiirinayo miiska lana xisaabayo, loona qoondeeyay wadarta tamarta saddex cunno maalintii iyadoo loo eegayo saamiga 30%, 40% iyo 30%.
(2ï¼ ‰ Labaad, u qoondee tamarta raashin kasta saddexda nooc ee nafaqooyinka wax soo saarka iyadoo loo eegayo saamiga tamarta ee kaarbohaydrayt ka ah 60%, baruurta ka dhigaysa 25% iyo borotiinka oo loo xisaabiyo 15%.
(3) U qaybi tamarta ay bixiso nafaqo kasta oo wax soo saar leh isugeyn wax soo saar si loo ogaado qadarka nafaqo kasta oo wax soo saar leh.
(4)Uqeybso xaddiga kaarbohaydraytyada saamiga karbohaydraytyada ee cuntada la soo xulay si aad u ogaato tayada looga baahan yahay cuntada daruuriga ah.
(5) Txaddiga borotiinka ee lagu kala jarayo cuntada daruuriga ah iyadoo la isku wada daro hal borotiin maalintii waa xaddiga borotiinka ee ay tahay in cuntada aan caadiga ahayn ay bixiso taas oo kala duwan iyo tirada cuntada aan caadiga ahayn waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan.
(6)Khudaarta waxaa loo qaabeeyey sida ay tahay 400-500g maalintii; Miraha waxaa loogu talagalay inay noqdaan 100-200g maalintii.
Shuruudaha qaadashada cuntada, qaadashada dadka waaweyn ee maalinlaha ah 1.0-2.0kg (inta badan 1.2-1.6kg), quraacdu kama badna 400g, qiyaastii 400-800g qado, casho 400-500g, sida cuntada dareeraha ah, qaadashada cuntada si habboon ayaa loo kordhin karaa .
Shuruudaha falanqaynta, bixinta tamarta oo ka badan 90% heerka waa caadi; Waa caadi in borotiin aan ka badneyn ± 10% maalintii, iyo celceliska qadarka toddobaadlaha ee borotiin aan ka badneyn ± 2g maalintii. in ka badan 80% ee heerka saadka maalinlaha ah, iyo celceliska qadarka asbuuclaha ee aan ka yarayn 90% ee heerka sahayda ee caadiga ah Kalsiyum, fitamiin A, fitamiin B2 iyo nafaqooyinka kale ma gaaraan heerka 80% - 90% in la isku dayo in la sameeyo.
3. Xaddidyada alaabada ee boorsada qadada dadka waaweyn (faahfaahinta)
4. Baakadaha iyo keenida boorsooyinka qaan-gaarka ee dadka waaweyn
(2) Cabbirka cabbirka ee caadiga ah: 50 * 30 * 30CM, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 50CM X 30CM X 30CM. 10PCS / sanduuqa.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 22KG.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 20KG.
S8: Waa maxay waqtigaaga hogaaminta wax soo saar ballaaran maalmo?
Calaamadaha kulul: Xidhmada qadada qaangaarka ah, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka